Ny fitaovam-pitenenan'ny faritra, fitaovana momba ny linguisty ambanivohitra, fitaovana amin'ny fiteny vitsy an'isa.
Ny URL-n'ny tranonkala dia amin'ny teny Anglisy. Noho izany, tsy afaka manokatra tranokalan'ny tranonkala ny olona tsy miteny anglisy, ambanivohitra ary ny faritra. Ny fitaovan'ny fiteninay no tena fitaovana ho azy ireo.
1. Ny mpizara amin'ny teny avy any an-toerana dia mahazo pejy amin'ny alàlan'ny fanampian'ny olona iray indray mandeha